Atsaharo ny WordPress Spam miaraka amin'ireo toro-hevitra avy amin'ny Semalt
Fananganana spam sy fanamarihana spam no olana lehibe roa lehibe ho an'ny WordPress blogs sy tranonkala. Ny mahazatra dia ny tranokala avo lenta ahazoana tsikera an-jatony an'arivony ary fanoratana sandoka isan-kerinandro. Ireo karazana spam ireo dia mety hanimba na hanimba ny lazanao amin'ny fitaovan'ny fikarohana sy ny mpamaky raha toa ianao ka tsy mahomby izany. Noho izany, tokony hiatrika ireo mpitsoa-ponenana ianao ary hanakantsakana ny fanandramana hanatsara ny tranokalanao na ny bilaogy. Soa ihany, misy toro-hevitra vitsivitsy mba hiatrehana ny fanamarihana ny mpitsoa-ponenana sy ny fisoratana anarana.
Raha efa nametraka ny tranokalan'ny WordPress tsara ianao, dia mety hanaraka ireo torohevitra ireo Frank Abagnale, manam-pahaizana ambony indrindra Semalt , mba hiantohana ny fiarovana sy ny fiarovana ny tranokalanao amin'ny Internet.
Toro # 1: Manetsa ny fifanakalozan-kevitra momba ny WordPress:
Na dia azonao atao aza ny mametraka plugins maro be mba hiatrehana tsaho sy spam fanamarihana, dia azonao atao ny mametraka ny sehatra hifanakalozan'ny WordPress. Izy ireo dia mipetraka ao amin'ny sehatry ny Settings ao amin'ny faritra admin, toy ny www.abc.com /wp-admin/options-discussion.php. Ny fomba tsotra sy feno porofom-panitsiana ny fanamarihana ny spam sy ny tranonkala fisoratana anarana dia ny mankasitraka ny fanehoan-kevitrao ary mamadika ny fisoratana anarana isaky ny fe-potoana. Ny fomba mahazatra kokoa anefa dia ny fametrahana ireo plugins izay mamela anao hamerina hijery ilay mpaneho hevitra ary mankasitraka azy ireo avy hatrany..Ny fanehoan-kevitra izay mijery tsy ara-dalàna dia tsy havoaka amin'ny tranokalanao. Toy izany koa, ireo mpiserasera manana lisitra anaty lisitra anaty lisitra dia tsy afaka manoratra na misoratra amin'ny gazetinareo.
Toro # 2: avereno jerena foana ny fanovozan-kevitra:
Mba hiatrehana ny fanamarihana spam na ny tranonkala fanoratana dia tokony hizaha sy hamerina hijery ny toerana misy ny fifanakalozan-kevitra ianao alohan'ny hanekena zavatra ao amin'ny tranonkalanao. Izany dia fomba lehibe hampihenana ny isan'ny fanehoan-kevitra momba ny spam sy ny fanoratana tonga ao amin'ny tranonkalanao isan'andro.
Toro # 3: Mametraka ny endrika Captcha:
Ny endrika Captcha dia napetrak'ireo olona marobe ary miasa toy ny fitaovana mahery vaika manohitra ny spam. Manampy amin'ny fampihenana ny isan'ireo fanehoan-kevitra amin'ny spam izy ireo ary manakana ny fampielezana ny spam. Tokony hametraka sehatra captcha avy hatrany ianao ao amin'ny tranokalanao ary manohy manala ireo fanehoan-kevitra izay tsy manara-dalàna. Ankoatr'izay, tsy tokony hankatoavinao ny mpanoratra na ny editor izay tsy atokisanao.
Toro # 4: Ny Plugin Akismet:
Akismet dia plugin-mahery sy mahery vaika izay noforonin'i Automattic. Anisan'izany ny dika mitovy amin'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny rakitra manokana ary manampy anao hamaha ny fanehoan-kevitra spam sy ny spam amin'ny fisoratana. Ity plugin ity dia miaro ny tranonkalanao amin'ny solosaina ary manamarina ny fanehoan-kevitra rehetra sy ny fisoratana anarana ho an'ny fahitsiana alohan'ny fankatoavana azy. Na izany aza, ity plugin ity dia tsy manaiky foana ny fanehoan-kevitra ara-drariny ary tsy afaka manamarina izay tsetsatsetsa ary tsara ny ratsy.
Toro # 5: Fanamarihana ny fanehoan-kevitra momba ireo lahatsoratra taloha:
Adi-hevitra lehibe iray hafa dia ny manala ny fanehoan-kevitra ao amin'ny hafatrao taloha ary misoroka ny fisoratana anarana amin'ny solosaina rehefa mandeha ny tranokala. Tsy afaka hamaly ireo mpitsikilo raha efa nanala ny asan'ny tranonkalanao ianao. Noho izany dia mandehana any amin'ny faritra Fifanakalozan-kevitra> ary tadiavo ny bokotra fanamarihana "Automatique Close". Tsindrio ity bokotra ity ary atsangano indray ny varavarankely / fiasanao.
Toro # 6: Ilaina ny fanetren-tena:
Mankanesa any amin'ny sehatra> Fifanakalozan-kevitra izay ahitanao karazana safidy samihafa ny tranonkala WordPress izay manolotra ny fanakanana ny spam fanamarihana sy ny tranonkala fisoratana anarana Source .